माछाका लागि डिस्टिल्ड वाटर ठीक छ - BikeHike
घर » विविध » डिस्टिल्ड वाटर माछाको लागि ठीक छ
के माछा आसुत पानीमा बाँच्न सक्छ?
माछाको लागि कुन पानी राम्रो छ?
कुन बोतलको पानी माछाको लागि सुरक्षित छ?
शुद्ध पिउने पानी माछाको लागि सुरक्षित छ?
गोल्डफिशको लागि डिस्टिल्ड पानी राम्रो छ?
के म बेटा माछाको लागि डिस्टिल्ड पानी प्रयोग गर्न सक्छु?
माछा ट्याङ्कीको लागि वसन्तको पानी वा आसुत पानी राम्रो छ?
धाराको पानी माछाको लागि सुरक्षित हुन कति समय लाग्छ?
शुद्ध वा आसुत पानी राम्रो छ?
सुनको माछाको लागि कुन पानी राम्रो छ?
माछा ट्याङ्कीको लागि बोतलको पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
माछाका लागि पानीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने ?
के आसुत पानीमा क्लोरिन हुन्छ?
म कसरी मेरो एक्वैरियममा RO पानी रिमिनरलाइज गर्छु?
के आसुत पानी नुन पानी ट्यांक को लागी राम्रो छ?
के सुनको माछा क्लोरिनयुक्त पानीमा बस्न सक्छ?
के तपाइँ आसुत पानी पिउन सक्नुहुन्छ?
आसुत पानी के को लागी प्रयोग गरिन्छ?
मेरो माछा सफा गरिसकेपछि ट्याङ्कीमा फिर्ता राख्न मैले कति समय पर्खनुपर्छ?
तपाईं माछा ट्याङ्कीमा पानी कति पटक परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
बेटा माछालाई कस्तो पानी चाहिन्छ?
तपाईंले आफ्नो माछा ट्याङ्कीमा पानी परिवर्तनको लागि डिस्टिल्ड पानी प्रयोग गर्नु हुँदैन। माछा र बोटबिरुवाहरूले समान रूपमा पानीमा खनिजहरू प्रयोग गर्छन्, जहाँ मानिसहरूले खानाबाट आवश्यक सबै प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यो मात्र होइन, तर खनिजहरूले पानीमा पीएच स्तरलाई विनियमित र स्थिर गर्नेछ। अलिकति पनि pH स्विङ माछाको लागि घातक हुन सक्छ।
माछा ट्याङ्कीहरू डिस्टिल्ड वाटरले भरिनु हुँदैन किनभने यसबाट खनिजहरू हटाइन्छ। फलाम र क्याल्सियम जस्ता खनिजहरूले माछालाई फस्टाउन मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, माछामा अर्ध-पारगम्य झिल्ली भएको कारणले, माछाले शुद्ध, आसुत पानीमा घातक आघात अनुभव गर्न सक्छ।
एक्वेरियम पानी स्रोत नगरपालिका ट्याप पानी। सायद तपाईंको माछालाई पानीयुक्त घर प्रदान गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका ट्याप खोल्नु हो। कुवा पानी। यदि तपाईंको घरमा इनारको पानी छ भने, पानीमा क्लोरिन हुँदैन। बोतलको पानी। वर्षाको पानी। डिस्टिल्ड वाटर। रिभर्स ओस्मोसिस (RO) पानी। डियोनाइज्ड (DI) पानी।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि पानी डिस्टिल्ड, डिमिनरलाइज्ड, स्वादयुक्त वा आयनीकृत छैन। यो स्रोत, uncarbonated, प्राकृतिक वसन्त पानी मा बोतल हुनुपर्छ। रिभर्स ओस्मोसिस पानी माछाको लागि सुरक्षित नहुन सक्छ किनभने यो फिल्टर गरिएको छ, र केहि खनिज सामग्री प्रक्रियामा बाहिर निकालिएको छ।
डिस्टिल्ड वा शुद्ध पानी, नियमित ट्यापको पानी भन्दा धेरै फरक छ किनभने यसलाई सबै रसायन, खनिज र पोषक तत्वहरू हटाउन प्रशोधन गरिएको छ, जसले तपाईंलाई शुद्ध पानी बाहेक केही छोड्दैन। बेटा माछाको लागि यो प्रकारको पानी सिफारिस गरिएको छैन।
पोन्जियोले भने, क्लोरिनेटेड ट्यापको पानी, बोतल वा डिस्टिल्ड पानी, वा धेरै अम्लीय वा क्षारीय पानीमा सुनको माछा राख्नु घातक हुन सक्छ। गोल्डफिश, कार्प परिवारका सदस्यहरूले धेरै फोहोर उत्पादन गर्छन्, त्यसैले तपाईंलाई फिल्टरिङ प्रणाली पनि चाहिन्छ। फोहोरमा अमोनिया हुन्छ, जुन तिनीहरूका लागि विषाक्त हुन्छ।
तपाईंको ट्याङ्कीमा थप्नको लागि उत्तम पानी ट्यापको पानी हो, जबसम्म यो पहिले कन्डिसन गरिएको छ। त्यो असफल भएमा, तपाईंले वसन्तको पानी प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईंले सधैं शुद्ध वा आसुत पानीबाट जोगिनै पर्छ, किनकि यसमा तपाईंको बेटालाई बाँच्नको लागि आवश्यक खनिज र पोषक तत्वहरूको अभाव हुन्छ। यो अक्सर एक तनाव कोट additive प्रयोग गर्न लाभदायक छ।
यदि तपाईं त्यो मार्गबाट ​​तल जान चाहनुहुन्छ भने डिस्टिल्ड/आरओलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर यसलाई रिमिनरलाइज गरिनुपर्छ। म एक समुद्री जीवविज्ञानी हुँ र अनजाने माछा मा विष विज्ञान परीक्षण संग यो प्रयोग गरेको छु। धेरै सफा कन्टेनरमा एक्लै डिस्टिल्ड पानीले माछालाई छिट्टै मार्छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा खनिजहरूको अभाव होइन।
ट्यापको पानीलाई सधैं २४ घण्टासम्म बस्न दिनुहोस् ताकि क्लोरीन वाष्पीकरण हुने मौका होस्। वा यदि तपाइँ पर्खन सक्षम हुनुहुन्न भने तपाइँ अर्को रसायनको साथ पानीको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ।
शुद्ध पानी सामान्यतया एक राम्रो विकल्प हो किनकि शुद्धीकरण प्रक्रिया पानी बाट रसायन र अशुद्धता हटाउँछ। तपाइँ आसुत पानी पिउनु हुदैन किनकि यो स्वाभाविक रूप मा हुने खनिजहरु को कमी, क्याल्सियम र म्याग्नेशियम सहित, कि स्वास्थ्य को लागी लाभदायक छ।
सुनौलो माछा चिसो पानीको माछा हो, जसको मतलब उनीहरूलाई हिटरको आवश्यकता पर्दैन। सुनको माछाले ६२ देखि ७२ डिग्री फरेनहाइटको बीचमा आफ्नो पानी मन पराउँछ। साथै, सुनको माछाले नरम पानीमा राम्रो काम गर्छ, यसको अर्थ यसको क्षारीयता यसको अम्लता भन्दा बढी हुन्छ। सुनको माछा तब फल्छ जब तिनीहरूको पानीको पीएच 62 र 72 बीचमा हुन्छ।
उदाहरणका लागि, केही बोतलको पानीलाई अझै पनि क्लोरीन हटाउन आवश्यक छ। र किनभने बोतलको पानी हाम्रो लागि पिउनको लागि डिजाइन गरिएको हो, यो प्रायः डिस्टिल्ड पानी प्रयोग गर्नु भन्दा धेरै महँगो हुन्छ। म आकस्मिक अवस्थामा माछा ट्याङ्कीको रूपमा बोतलको पानी प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छु, जब अरू केही उपलब्ध छैन।
माछा-पालकहरूले आफ्नो माछाको लागि ट्यापको पानीलाई एक्वेरियम स्टोर वा पाल्तु जनावर पसलबाट प्राप्त गर्न सकिने तरल पानी कन्डिसनरको साथ पूर्व-उपचार गरेर सुरक्षित बनाउन सक्छन्। स्ट्रेसकोट (एपीआई द्वारा बनाईएको) जस्ता उत्पादन छनोट गर्नुहोस् जसले क्लोरीन र क्लोरामाइन दुवैलाई तुरुन्तै डिटोक्सिफिकेसनका साथसाथै कुनै पनि भारी धातुहरूलाई बाँध्छ।
के आसुत पानीमा क्लोरिन हुन्छ? सरल भाषामा भन्नुपर्दा, होइन! Durastill डिस्टिल्ड वाटरमा क्लोरीन हुँदैन। तर कम गुणस्तरको पानी डिस्टिलेसनले क्लोरिनलाई राम्ररी हटाउन र फिल्टर गर्न सकेन।
क्याल्सियम क्लोराइड, एप्सम नुन, र बेकिंग सोडाको मिश्रणले तपाईंको माछा ट्याङ्कीको लागि आरओ पानीलाई पुन: खनिज बनाउन चमत्कार गर्दछ। थप सुव्यवस्थित दृष्टिकोणको लागि, हामी तपाइँको ट्यांकमा पुन: खनिज कारतूसहरू स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं।
आसुत पानीको समस्या यो हो कि यो सामुद्रिक जीवनको लागि धेरै शुद्ध छ। माछालाई बाँच्नको लागि अणुहरूलाई हाइड्रोजन र अक्सिजन भन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यसको मतलब तपाईंले आसुत पानी प्रयोग गर्नबाट जोगिनै पर्छ, विशेष गरी जब तपाईं आफ्नो नुन पानी एक्वैरियममा पानी परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ।
क्लोरीन वायुमण्डलको सम्पर्कमा आएपछि तुरुन्तै नष्ट हुन्छ र क्लोरामाइन/अमोनिया तपाईंको फिल्टरमा चारकोल मिडियाद्वारा अवशोषित हुन्छ। तपाईंको माछा ठीक छ र उचित हेरचाह संग लामो जीवन बाँच्नु पर्छ। सुनको माछा कैदमा १० वर्ष (औसत) भन्दा बढी बाँच्न सक्छ। वास्तवमा, सबैभन्दा पुरानो रेकर्ड 10 वर्ष पुरानो थियो।
आसुत पानी पिउन को लागी सुरक्षित छ। तर तपाइँ शायद यो सपाट वा नरम पाउनुहुनेछ। यसको कारण यो हो कि यो क्याल्सियम, सोडियम, र म्याग्नेशियम जस्ता महत्वपूर्ण खनिजहरु बाट छुटेको छ कि ट्याप पानी लाई यसको परिचित स्वाद दिन्छ। के बाँकी छ मात्र हाइड्रोजन र अक्सिजन र अरु केहि छैन।
डिस्टिल्ड वाटरको प्रयोगमा आइस क्यूब, सूप, कफी, चिया, पास्ता, चामल, बेबी फार्मुला, जुस, कूल-एड®, वा केवल स्वस्थ पिउने पानी पनि समावेश छ। दुर्भाग्यवश, ट्यापको पानीमा पाइने प्रदूषकहरूले अझै पनि तपाईंको शरीरमा आफ्नो बाटो खोजिरहेका छन् जबसम्म तपाईं सधैं शुद्ध आसुत पानी प्रयोग गर्नुहुन्न।
यदि एक्वैरियममा धेरै परिवर्तन भएको छैन भने, तपाईंले ट्याङ्कीमा सबै उपकरण, सजावट र बोटबिरुवाहरू राखेको २४ घण्टा पछि आफ्नो माछा फिर्ता राख्न सक्नुहुन्छ।
Betta माछा लगभग 7.0 को "तटस्थ" pH भएको पानीमा फल्छ। धेरैजसो ट्यापको पानीको pH ६.५ देखि ७.५ को दायरामा पर्नेछ। तपाईंको माछाको लागि उत्तम दायरामा नलबाट सीधा तापक्रम समायोजन गर्न सजिलो छ।
बेट्टा माछाको लागि डिस्टिल्ड वाटर ठीक छ
द्रुत उत्तर: डिस्टिल्ड वाटरमा माछाले सास फेर्न सक्छ
डिस्टिल्ड वाटर माछाको लागि सुरक्षित छ
द्रुत उत्तर: के कुकुरहरूलाई डिस्टिल्ड पानी दिन ठीक छ
द्रुत उत्तर: कुकुरहरूले डिस्टिल्ड पानी पिउन सक्छन्
के कुकुरहरूले डिस्टिल्ड पानी पाउन सक्छन्
के तपाईको कुकुरलाई डिस्टिल्ड वाटर दिनु ठीक छ?
प्रश्न: के डिस्टिल्ड वाटरमा माछा बस्न सक्छ?
बेट्टा माछा डिस्टिल्ड वाटरमा बाँच्न सक्छ
डिस्टिल्ड वाटर माछाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ
प्रश्न: के तपाइँ माछाको लागि डिस्टिल्ड वाटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
प्रश्न: के डिस्टिल्ड वाटर बेट्टा माछाको लागि राम्रो छ